रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित ! - Sacho Post
रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित !
२०७७ आश्विन १५, बिहीबार ०९:२१ बजे
कोरोना भाइरसविरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै छ । रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच खोप नेपालमा भित्र्याउने सम्झौता भएको हो । नेपालमा ल्याइने भनिएको ‘स्पुतनिक–५’ भ्याक्सिन ‘ह्युमन एडेनो भाइरल भेक्टर्स प्लेटफर्म’ मा आधारित छ ।
फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० किरिल डिमिट्रेभले ट्रिनिटीसँग भएको सम्झौताबाट नेपालका ९० प्रतिशत जनसंख्याका लागि पुग्ने गरी भ्याक्सिन उपलब्ध हुने जानकारी दिए । २ करोड ५० लाख भ्याक्सिनले नेपालको ९० प्रतिशत जनासंख्यालाई समेट्ने बताइएको छ ।
भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि खोप ल्याउन आयातकर्ताले औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन नदिएको पाइएको छ । यो भ्याक्सिनको मूल्य ५ सय नेपाली रुपैँया न्यूनतम पर्ने बुझिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
कोरोनाबाट अरुलाई बचाए तर दुनियाँकै मनमा बसेका डाक्टरले जीवन गुमाए
श्रीमान विदेश गएपछि बिबाहित महिला ग’र्भनिरोधी औषधि लिन अस्पताल आउँनुलाई के भन्नुहुन्छ ?